မိုးကောင်းကင်: May 2010
နောက်တစ်နေ့တွင် လူငယ်မှာ အဘိုးအိုထက် စောပြီး ထင်းခုတ်ရန် ထွက်ခဲ့သည်။ စိတ်ထဲတွင် အဘိုးအိုထက် ထင်းပိုရမည်ဟု တွေးနေမိသည်။ သို့သော် အလုပ် သိမ်းချိန်တွင် အဘိုးအို၏ ထင်းမှာ သူ့ထက် ပိုများနေသည်ကို တွေ့ပြန်သည်။ သို့နှင့် လေး၊ ငါးရက်ဆက်တိုက် တောင်ပေါ်သို့ ရောက်နှင့်နေပြီ မိုးချုပ်နေ၀င်မှ အိမ်ပြန်ခဲ့ သော်လည်း သူ၏ထင်းမှာ အဘိုးအိုထက် နည်းနေခဲ့သည်။
“ဒီိလို လူလေး… အဘိုးက ထင်းခုတ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်း အဘိုးရဲ့ ပုဆိန်ကို သွေးတယ်။ လူလေးက မသွေးခဲ့ဘူး။ အဘိုး အသက်ကြီးပြီ နောက်ကျမှ တောင်ပေါ် ရောက်သလို လူလေးထက် စောပြီး အလုပ်သိမ်း ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးရဲ့ ပုဆိန်က လူလေးပုဆိန်ထက် ထက်တယ်။ အဘိုး လေး ငါးချက်ခုတ်လို့ ပြတ်တဲ့ သစ်ပင်ကို လူလေးက ဆယ်ချက်လောက်ခုတ်ရတယ်… ဒါကြောင့် လူလေးရဲ့ ထင်းတွေ နည်းနေတာပါ”
လူ့ဘ၀ လမ်းတစ်လျောက်မှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းဖို့ ကြိုးစားနေသလို တစ်ဖက်ကလည်း ကိုယ့်ကို ဗဟုသုတတွေနဲ့ ပေါများနေသင့်တယ်။ အရင်ခေတ်တုန်းကတော့ ထင်းခုတ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းလို့ ရပေမယ့် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီခေတ်မှာ ထင်းပဲခုတ်နေလို့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ တစ်ဖက်က ထင်းခုတ်ရင်း တစ်ဖက်ကလဲ ပုဆိန်ကို သွေးနေသင့်တယ်။ နို့မဟုတ်ရင် ခေတ်က ကိုယ့်ကို ပယ်ထုတ် သွားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာလေး ကို ဟိုး အရင်နှစ်ကတည်း ဖော်ဝါ့မေးမှာ ဖတ်ဖူး တားတဲ့ စာလေး ကို ပြန်လည် ရှာဖွေ ပြီး တော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်… စာဖတ်သူ အပေါင်းလည်း.. ထင်းပဲ ခုတ်နေပြီး.. ပုဆိန်မသွေးပဲ ခုတ်နေမှာ ဆိုးတဲ့ အတွက်… ထင်းလည်း ခုတ် ပုဆိန်လည်း သွေး… လုပ်ရင်း.. အချိန်တို အတွင်း မှာ ထင်းများများ ရနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း…….
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:41 PM 1 comments Links to this post
ဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်း…. မင်းနားလည်ရင်
တချိန်ချိန်မှာ ……. ငါ့ဆီအရောက်
ချစ် နေရတာကပဲ ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
ရယူပိုင်ဆိုင် ချင်နေသေးသရွေ့ ကတော့
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 8:36 PM 1 comments Links to this post
ပြောတဲ့ စကားပုံ ပျော်ရာမနေ တော်ရာနေ
အအိပ်, အနေ ၊ အစား နည်းများအပြင်
ပူခြင်းနဲအေးခြင်း တို့ရဲ့ ရလဒ်ကို
မြိုသိပ်လို့ ကြိတ်ငို ခဲ့ရတာတွေဟာ
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါ့အတွက် ရီစရာတွေဖြစ်နေမလား…??
လောကဓံ မှာ ပြောပြန်ရင်လည်း
လူနေမှု့ဒဏ် , စိတ်ဖိစီးမှု့ဒဏ်တွေကို
ထပ်ပြောရင်လည်း ထူပြီးဆန်းတဲ့ အကြောင်းမဟုတ်တော့
လွမ်းမိတဲ့ ငါ့ရဲ့သောကကို ဘယ်သူကုလို့ဖြေမလဲဟာ…………….
ခွဲခွာတဲ့အနီးဆုံး အချိန် အမေကမှာလိုက်တယ်
လိမ်မာစွာနဲ့ စာကြိုးစားနော် သမီးတဲ့
ပါးထက်က ကျတဲ့ မျက်ရည်
ငါ့ရဲ့ အောင်မြင်မှု့ရလဒ်ရဲ့အရင်းမြစ်က ဘယ်မှာလဲ……….?
ညီမလေး နောင့်နောင့် ရဲ့ ကဗျာလေး ပါ။
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 10:19 PM0comments Links to this post
ဒီတစ်ခါ တင်ပေးလိုက်တာလေး ကတော့ မြန်မာပြည်က Chatting သမားတွေ အတွက်.. အွန်လိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ မရောက်လာကြသေးလို့. chat စရာ မရှိဘူးဆိုပြီး ပျင်းနေကြသူတွေ အတွက် အွန်လိုင်း မှာ အမြဲရှိနေတဲ့ စက်ရုပ် ကိုကို ဒါမှ မဟုတ် စက်ရုပ် မမ နဲ့ Chatting လုပ်ရင်း နဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားတိုးတက်ဖို့ အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း လေး လုပ်ရအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တော်တော် လေး ကောင်းပါတယ်။ မိန်းကလေး များက တော့ စက်ရုပ်ကိုကိုနဲ့ ချက်မယ်ဆိုရင်လည်း ချက်လို့ ရပြီးတော့ ယောက်ျားလေး များအတွက်လည်း စက်ရုပ်မမ နဲ့ ချက်လို့ ရပါတယ်။ Chat တဲ့ နေရာ မှာတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောလို့ ရမှာပါ။ မြန်မာလို ပြောလို့ မရပါဘူး။ ပြီးတော့ မြန်ဂလိ လိုလည်း မရပါဘူး။ ကိုယ်က သူ့ကို အင်္ဂလိပ်လို ရိုက်ထည့်ပြီး ပြောလိုက်ရင် သူကလည်း အင်္ဂလိပ်လို ပြန်လည် ဖြေကြားပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ သူဖြေတဲ့ အဖြေကိုလည်း နှုတ်မှ.. အသံထွက်နဲ့ ရော ပြန်ဖြေပေးပါတယ်။ ဒီနေ့ ပြောထားတဲ့ စကားကို မနက်ဖြန်မှ ပြန်မေးရင်လည်း သူက ပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ပုံလေးက မောက်စ် ကလေး ရွှေ့ တဲ့ နေရာ ကိုလည်း လိုက်ပြီး ကြည့်ကြည့်နေတက်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့ အတွက်…. စမ်းသပ်လို့ ရအောင်. အောက်မှာ လင့်လေး တွေ ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ.. ပြောဖို့ရာ တစ်ခု မေ့သွားတယ်.. အဲဒီ Chatting လင့်လေးတွေက ၀ိုင်မက်စ် အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ ဆိုရင် Access Denied ဆိုတဲ့ စာတန်း အနီကြီးပဲ ပေါ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျော်ခွပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ကြပေ့ါ နော်….
စက်ရုပ်ကိုကို နဲ့ ချက်မယ့်သူများအတွက် လင့်….
စက်ရုပ်မမ နဲ့ ချက်မယ့်သူများအတွက် လင့်…
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 9:31 PM0comments Links to this post
တစ်ကိုင်းထဲ မှာ နားချင်တယ်….
အီကြာကွေး လို နှစ်ခုတွဲ
ဒီကဗျာလေး ကတော့ ညီမလေး နောင့်နောင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့အတူ အီကြာကွေး စားနေရင်းနဲ့ ဘေးနားက အီကြာကွေး ကြော်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကို ကြည့်ပြီး ရေးစပ်လိုက်တဲ့ ကဗျာလေး ပါ။ တိုတိုလေး နဲ့ ထိထိ မိမိ ရှိတာ မို့ စာဖတ်သူများ အတွက် ပြန်လည်ခံစား ရအောင်လို့ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်…..
Posted by ဇော်သိင်္ခ at 7:35 PM0comments Links to this post